တအားစောင့်နေတာ – Grab Love Story
၇တန်းအောင်ပြီး၈တန်းတတ်စလောက်ကပေါ့ အရွယ်လဲနည်းနည်းရောက်လာပြီလူပျိုဝင်လာပြီစိုတော့ကာမစိတ်တွေလဲတဖွားဖွားပေါ့ တစ်ဖွားဖွားစိုတာနဲ့တွေ့သမျှဖင်တွေကြည့်ပြီးအိမ်ရောက်ရင်မှန်းမှန်းထုရတာကလဲအရသာရှိသကိုး.. ၈တန်းကျောင်းစတတ်တော့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရတယ်ကျွန်တော်ကလဲလူအေးစိုတော့သိပ်အပေါင်းသင်းမရှိဘူး ကျွန်တော်ပေါင်းမိတဲ့ကောင်ကလဲလူအေးဘဲစိုပါတော့ နာမည်က”မြတ်မင်း”တဲ့အေးလိုက်တဲ့ပုံများရေခဲတုံးကြနေတာဘဲ။
အဲ ဒါပေမယ့်တနှာကာမတော့ကြီးရော ဒါကတော့ကျွန်တော်ရောဘဲလေ အတန်းထဲမှာမြန်မာစာသင်တဲ့ဆရာမအိမ်နဲ့မြတ်မင်းအိမ်ကကပ်လျက်ဘဲ အဲ့ဒီဆရာမနာမည်က”ဒေါ်ဥမ္မာကျော်”တဲ့ဗျ။ စာအရမ်းအသင်ပြကောင်းတယ်အမြဲတန်းမျက်နှာလေးကပြုံးပြုံးရွင်ရွင်ဘဲ အသက်ကတော့..၂၄လောက်ရှိပြီထင်တယ်ခုထိနုပြိုထွားကြိုင်းနေတုန်းဘဲ မြတ်မင်းစိူတဲ့အကောင်ကလဲဆရာမရေချိုးနေရင်ခိုးခိုးကြည့်ပြီးအိုးတွေတောင့်ကြောင်းနို့တွေကားကြောင်းကျွန်တော့်ကိုပြောပြောနေကြဗျ။
အဲ့အချိန်ဆရာမရောက်လာတယ်.ဆရာမကအတန်းပိုင်စိုတော့ဘာနေနေအစွန်းထင်းမခံဘူးလေလိုက်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကို.ကျွန်တော်တို့ကလဲအားတိုင်းဆီးခြံဘဲသွားနေတော့ဆရာမကသိနေတာ. “ဟဲ့”မြတ်မင်းနဲ့ ကျော်ကျော်” ကျောင်းတတ်နေပြီလေ နင်တို့မသိဘူးလား”ကျွန်တော်တို့ဆရာမအသံကြားတော့လန့်ပြီးထလိုက်တာခုနကဆရာမအိုးအကြောင်းပြောရင်းလီးကို၂ယောက်သားစွနေတာ ခုထလိုက်တော့တောင်ပြီးတန်းနေတာဘဲဆရာမအဖုတ်ကို.ဆရာမမျက်မှောင်ကုတ်ပြီးမသိခြင်ယောင်ဆောင်ပြီး။
“ဟဲ့”လာကြဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲငါ့နောက်လိုက်ခဲ့စာသင်မယ်” ဟုတ်ဟုတ်ဆရာမ” “ကျွန်တော်တို့၂ယောက်လဲလီးတွေမြင်သွားတဲ့ဆရာမကိုမျက်နှာမကြည့်ဘဲခေါင်းငုံပြီးနောက်ကလိုက်လာကြတယ်.မြတ်မင်းကတိုးတိုးလေးပြောတယ်”ကျော်ကျော်”ဟေ့ကောင် ဆရာမဖင်ကြီးကြည့်စမ်းဘစ်ရာထင်ပြီးတင်းနေတာဘဲဟ”အေးကွလိုးချင်စရာကြီး ။ “ဆရာမဖင်ကိုဒီတစ်ခါအနီးကပ်သေချာမြင်ဘူးတာဘဲ”လိူးချင်လိုက်တာကွာ”ဟူကျွန်တော်လဲတီးတိုးပြောလိုက်တယ်”။
ဆရာမကကြားသွားပုံရတယ်ဗျကျွန်တော်တ်ု့ကိုနောက်လှည့်ကြည့်ပြီး”သေမယ်နော်ဟဲ့အကောင်တွေ”မိုက်မရိုင်းကြနဲ့ဟွင်း” လန်းသွားတာပေါ့ ဆရာမကြားတယ်ဟတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လက်ကုတ်ရင်းမချိပြုံးပြူံးပြီးလာခဲ့ကြတယ် စာသင်ခန်းထဲရောက်တော့ဆရာမမျက်နှာကပြုံးတာလိုလိုရှက်တာလိုလိုဖြစ်နေတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်feelတွေတတ်နေလားမသိဘူး ပေါင်ကြားထဲလက်ထည့်ပြီးကျောင်းသားတွေကိုစာလိုက်ဖတ်ခိုင်းနေတာ။
နောက်နေ့မနက်ဒီနေ့ကဆရာမကိုမလိူးခင်တစ်ရက်ပေါ့ ကျွန်တော်နဲ့မြတ်မင်းမနေ့ကဆရာမအိုးအကြောင်းပြောရင်းရီရီမောမောကျောင်းလာကြတယ်။ အဲ့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့မြင်ခွင်းကစိတ်ထဲတလပ်လပ်နဲ့ပေါင်ကြောကနေတစ်ဆင့်လီးကြောထဲထိဖီလ်းတွေရောက်လာပြီးလီးပါမသိမသာတောင်လာတယ်.ဘာလို့စိုတော့ ဆရာမဒီနေ့ဝတ်လာတဲ့အပေါ်အင်္ကျီအဖြူကအပါးသားလေးအထဲကိုထင်းထင်းနေအောင်မြင်နေရတာ မြင်လား မြတ်မင်း ဆရာမနို့အုံကအကြီးကြီးဘဲဖြူဖွေးနေတာဘဲဟ။
အေးကွကျော်ကျော်ရ ဆံပင်ကနေဆွဲပြီးလိုးလိုက်ရင်တော်တော်ဖီလ်းရှိမှာဘဲကွာ ငါလိုးချင်နေပြီကျော်ကျော်ရေ..’မြတ်မင်းဟျောင့်ငါလဲလိုးချင်တယ် တကယ်လိုးခွင့်ရရင်ငါအရင်လိုးမှာကွရှင်းလား.ကျွန်တော်ဟောက်သံနဲ့ပြောလိုက်တော့မြတ်မင်းတွန့်သွားတယ်အစကတည်းကလူကြောက်စိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဘဲလေဟဲဟဲ. “အေးပါကွာ”စဖုတ်ကစဖုတ်ဘဲလိုးရကျေနပ်ပါတယ်ကွာကျော်ကျော်ရာ”မင်းအရင်လိုးပေါ့ ပြီးမှငါလိုးတာပေါ့”။ ဒီလိုဘဲလေမစားရအညှော်ခံတာတောင်သူများထက်အရင်လိုးချင်တာဗျ။
ဒါပေမယ့်ကျောင်းခန်းထဲရောက်တော့ဆရာမဝင်လာပုံကကြွကြွရွရွနဲ့နို့တွေကလဲခုန်တတ်နေတာဘဲ မှန်းကြည့်ရင်အသီးလေးတောင်မြင်ရမှာဘဲ.ဖင်ကလဲဘေးတိုက်ဝင်လာတော့တင်းပြီးကော့တတ်နေတာဗျ.ဒါနဲ့ဘဲစာသင်နေကြတယ်.ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်သည်.လုပ်မယ်ကွာလို့စိတ်ထဲမှာပြောရင်း.မြတ်မင်းကိုပါပြောလိုက်တယ်”ဟျောင့်မင်းလုပ်ရဲလား”ဘာလဲဟ”ဘာမေးတာလဲငကျော်ရ” မင်းကိုလုပ်ရဲလားလို့မေးနေတာငတုန်းရဲ့”မြတ်မင်းပြုံးတတ်သွားပြီးမျက်နှာပြန်သေ သွားတယ်။
ရှေ့ကဆရာမကိုမြတ်မင်းလှမ်းကြည့်ပြီးကျွန့်ကိုပြန်ပြောတယ်..ဟျောင့်ငါလဲမင်းလိုဘဲတအားဆာနေပြီမရတော့ဘူး မင်းလိုအတွေးမျိုးငါလဲခုတွေးနေတာကွ။ “စိတ်ချင်းတူနေတဲ့ကျွန်တော်တို့၂ယောက်.စကားကိုဘောင်ဖွဲ့ပြောစရာမလိုဘဲ.ခေါင်းညှိတ်ပြပြီးစာဆက်သင်နေကြတယ်. တကယ်တော့အချိန်ပိုသင်တဲ့မနက်ဖြန်ညနေမှာစာကိုသေချာနားမလည်အောင်လုပ်သလိုလ်ုနဲ့ကျွန်တော်တို့၂ယောက်ထဲအခန်းထဲကျန်ခဲ့အောင်နေခဲ့မယ်.ပြီးရင်ဆရာမကိုမြတ်မင်းကချုပ်ကျွန်တော်ကလိုးမယ်ပေါ့။
ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့အသေအခြာဘဲဗျလိုးချင်နေတာဘဲသိတော့တယ်ဆရာမကတောင့်တင်းနေတာဗျ ခင်ဗျားတို့လဲကျူပ်တို့နေရာမှာစိူဒီလိုဘဲနေမှာပါ.ကဲ နောက်နေ့မနက် ကိုရောက်လာခဲ့ပြီဗျ ဆရာမကဒီနေ့အနွေးထည်ဝတ်ပါးပါးဝတ်လာတယ်.မနေ့ကသူ့နိုကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တာရိပ်မိသွားလို့နေမယ်ထင်တယ်ဗျ။ အနွေးထည်သာဝတ်တာနို့်ကြီးကဆူထွက်နေတုန်းဘဲမျက်စိအရသာရ်ှလိုက်တာဗျာ.ဆရာမတော့စာသင်နေပြီ ကျွန်တော်တို့စိတိတွေအရမ်းလွုပ်ရှားနေကြတယ်။
ညနေအမြန်ရောက်ချင်နေပြီလေ ဆရာမကတော့ဖင်ပွတ်လိုက်ရင်ပွတ်လိုက်န်ဲစကားတွေပြောစာတွေသင်နေတယ် တမြင်တကာဖိတ်ခေါ်နေတဲ့အတိုင်းဘဲဗျာ… ညနေကျောင်းဆင်းချိန်သို့ရောက်ရှိလာပြီ….. လီးတွေကတောင်နေပြီဗျိူ့ နှစ်ယောက်လုံးအချိန်ပိုသင်တဲ့စာတွေထဲကိုစိတ်ကမရောက်တော့ဘူး လထိပ်တွေလဲအရည်တွေစို့လို့ တအားပျင်းထန်နေပြီဗျ “ကဲကဲစာလာပြိုင်မယ် “နှစ်ရောက်တစ်တွဲ”ပြိုင်လို့ပြီးရင်အိမ်ပြန်ကြမယ်ဝေ့” ဆရာမဒေါ်ဥမ္မာကျော်လေသံပျော့ပျော့လေးနဲ့ကျောင်းသား၁၄ယောက်ကိုပြောလိုက်တယ်။
ညနေစိုတော့လဲမှောင်နေပြီလေတံခါးပိတ်လိုက်တော့ဂွင်ကောင်းသွားတာပေါ့.ဟိုကလေးမနှစ်ယောက်ပြီးတော့မယ်ဟျောင့်.မြတ်မင်းငါတို့စာအုပ်ကိုကြည့်နေစာကျက်ချင်ယောင်ဆောင်နေတော့ဟေ့.”အေးအေးငကျော်ရေ”လိုးဖို့ဂွင်ဘဲဟေ့. ဟဲ့၂ကောင်မရသေးဘူးလားဒီစာလေးကိုနင်တ်ု့အဖြစ်ကမရ်ှလိုက်တာမရမချင်းမပြန်ရဘူး” “ငါလဲမပြန်ဘူးရအောင်ကျက်.ဟုတ်ကဲ့ဆရာမ နဲနဲအချိန်ထက်ဆွဲလိုက်တယ်၅နာရီခွဲလောက်ကိုရောက်မှန်းမသိရောက်သွားတာ။
ဆရာမစိတ်မရှည်ဘဲ ဟဲ့နင်တို့လွန်နေပြီနော်.တော်ပြီနောက်နေ့မှကျက်တော့ငါလဲပြန်တော့မယ်။ ဟာဒီလိုစိုမဖြစ်ဘူးဘဲ “ဆရာမဒါစိုနောက်နေ့မှပြိုင်မယ်ဒါပေမယ့်ဒီသင်္ချိာစာလေးနဲနဲလောက်ရှင်းပြပေးပါလားကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်”ဘယ်ဟာလဲ ဒီအပုဒ်ဆရာမ ဆရာမကျွန်တော်တို့၂ယောက်နားစကားပြောပြီးရောက်လာတယ်”ဒီအပူဒ်ဆရာမ ဆရာမကမြန်မာစာသင်တော့သင်္ချာသိပ်မရှင်းပြတတ်ဘုးနေမှာရှင်းရင်းရွုပ်နေတယ်.မြတ်မင်းကိုကျွန်တော်လက်တ်ု့လိုက်တယ်။
မြတ်မင်းကရေသွားသောက်ပြီးပြန်တော့အတန်းခုံမှာကုံးပြီးစာပြနေတဲ့ဆရာမကိုနောက်ကနေလက်ကိုဆွဲပြီးဖက်ထားလိုက်တယ်.ကျွန်တော်လဲအလင်မြန်ဘဲအတန်းကထွက်ပြီးဆရာမခြေထောက်ကိုဆွဲကာစာသင်ခုံပေါ်တင်လိုက်တယ်. ဆရာမအံသြသွားပြီး”နင်တို့ဘာလုပ်တာလဲမိုက်ရ်ုင်းလှချီလား ခွေးမသားတွေ လွတ်ကြစမ်း လွတ်..လွတ်..အတင်းရုံးတော့တာပေါ့ယွကျားအားနဲ့မိန်းမအားစိုတော့လဲဆရာမဒေါ်ဥမ္မာကျော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။
အတန်းခုံပေါ်မှာလှဲနေတဲ့ဆရာမခြေထောက်ကိုကျွန်တော်ဖင်ထိုင်လိုက်တယ်ရုံးလို့မရအောင်လို့ပေါ့ မြတ်မင်းကတော့ဆရာမလက်တွေကိုအသေလဲချုပ်ထားတာပေါ့။ဆရာမအော်တယ် ဒါပေမယ့်တံခါးတွေအလုံပိတ်ထားပြီးကျောင်းဆင်းသွားချိန်တောင်ကြော်ပြီစိုတော့ဘယ်သူမှမရှိကြတော့ဘူး.ဆရာမခြေထောက်ပေါ်ကျွန်တော်တတ်ပြီးဆရာမအင်္ကျီကိုစွဲဖြဲလိုက်တယ်.ဟာ.နို့်ကြီးကဖြူဝင်းတင်းရင်းပြီးအိစက်နေတာဘဲဘောလီနဲ့တောင်မဆန့်ဘူးဆူထွက်နေတာဗျ။
တောင်ခနဲဘဲလီးကိုထတောင်သွားတယ်.”ဟျောင့်ကျော်ကျော်”ငါလိုးချင်နေပြီမြန်မြန်လုပ်”အသံလေးလေးပင်ပင်နဲ့မြတ်မင်းကလှမ်းပြောလိုက်တယ်”အေးအေးခနလေးပါကွာ ဆရာမမျက်နှားကြီးပြူးပြီးစွန့်အနေတယ် ဘော်လီကိုစွဲချွတ်လိုက်တယ်.နို့အုံကြီးစိုတာဗျာနဲတဲ့ဟာကြီးဘဲနို့သီးလေးကလဲဆူတတ်ပြီးပန်းရောင်ဖျော့ဖျော့နဲ့.လက်နဲ့အတင်းကြပ်ကိုင်ပြီးအားရပါးရစို့လိုက်တယ်ဆရာမတုံတုံရီရီဖြစ်သွားတယ်.မြတ်မင်းသေချာကိုင်ထားနော်.ဆရာမလည်ပင်းသားလေးတွေစို့ပေးသျှပ်ပေးနေတာ။
ဆရာမကော့ကော့တတ်သွားသလားမမေးနဲ့.ကျောင်းစိမ်းထဘီအဖြူလေးကိုချွတ်တော့မယ်။ တတ်ဖိထားတဲ့ခြေထောက်ပေါ်ကဆင်းပြီးဆရာမထဘီလေးကိုစချွတ်ပြီလေ.ဆရာမဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘဲတွန့်လူးနေတယ်.တင်ကြီးကလဲအကြီးကြီးဘဲဗျာ.စာသင်ခုန်ထက်တောင်ပိုထွကိနေတယ်။ဟာထဘီချွတ်လိုက်တော့.. ဖုဖောင်းနေတဲ့စပက်လေးအမွေးတွေနဲ့မြင်နေရတဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီအောက်ကစပက်လေး ဆရာမအတွင်းခံကအဖြူရောင်လေးအရည်တွေတောင်စို့နေတာ။
အား….အား…အ…အ ဆရာမဥမ္မာကျော်တွန့်တတ်သွားပြီးရုံးလိုက်တာမြတ်မင်းချုပ်ထားတဲ့လက်တွေပါပြုတ်ထွက်သွာတယ် “ဆရာမဖြေးဖြးလိုးပေးမယ်နော်ခုကြမှတော့မရုံးပါနဲ့တော့နော်”ဆရာမဘာမှမပြောနိုင်ဘဲမျက်စိမှိတ်အံကြိတ်ပြီးမိန်းနေတော့တယ်.မြတ်မင်းလဲလီးကိုစွပြီးကျွန်တော်အနားမှာလာကြည့်နေတော့တယ် “ထက်သွင်းပြီနော်ဆရာမ” ကြိတ်ခံထားပေး.. ဒစ်ကြီးကြီးနဲ့ပေါငိတတိနေတဲ့လထိပ်ကြီးနဲ့ဆရာမစပက်အသားလေးထဲထိုးထည့်လိုက်တယ်။
အား..အား ဖြေးဖြေးချင်းလေးဘဲအဆက်မပျက်သွင်းနေတယ်.ဆရာမကတော့နခမ်းတွေကိုက်လျက်ညီးသံတွေနဲ့အတူမိန်းနေတယ်.မြတ်မင်းကလဲဆူထွက်နေတဲ့နို့တွေကိုစို့ရင်းလီးကိုစွနေတာဗျ. “ဆရာမကိုလိုးခွင့်ရပြီကွာမြတ်မင်းရေ” ဆရာမကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပြီးမချိပြုံးပြုံးနေတယ် လီးကိုပြန်နုတ်ပြီးပါးစပ်ကတံတွေးတွေထွေးချလိုက်တယ်။ ဆရာမပေါင်တုတ်တုတ်ဖွေးဖွေးကြီးကိုသျှာနဲ့ရပ်ပြီးကျွန်တော့်ပုခုံးပေါ်တင်ပြီးထက်လိုးတော့တာပေါ့။
စောက်စိလေးကလဲပြူးစပက်ကလဲလိုးကောင်း.စောင့်စောင့်တည်တည်လိုးတော့တာပေါ့ အား..အား..ကျော်..ဖြေးဖြေး.ဆရာမနာတယ်ဟုတ်ဆရာမဥမ္မာ ဖြေးဖြေးဘဲနော်အား..အား..အား.. ပလပ်ပလပ် ပလပ်..ဆရာမဖင်နဲ့ကျွန်တော်ခါးနဲ့ရိုက်တဲ့အသံတွေကလဲကျယ်သတဲ့ကျယ်လာတယ်..လိုးချက်တွေလဲဒီထက်ပျင်းလာတယ် အား..အား..နာတယ် ကျော်ကျော်..ဖြေးဖြေးလိုးပါကွာ…အား..အ ဆရာမအသံလဲမကြားတော့ဘူး ဖီလ်းတွေအရမ်းတတ်နေပြီ….။
တအားစောင့်ထိူးစောင့်လိုးနေတာ ဖျောက်…ဖျောက်..ပလပ်..လပ်..အား.. နောက်ကိုအရှိန်ယူလိုက်ထက်လိုးလိုက်နဲ့အံကြိတ်ပြီးတွန်းလိုးလိုက်တယ်.. အား…အာ…ဆရာမရောကျွန်တော်ရောအသံပြိုင်အော်ပြီးလရည်များဆရာမစပက်ထဲရှောရှောနဲ့ဝင်သွားခဲ့သည်. “ကျော်ကျော်ပြီးပြီလား’ ဖယ်ငါလိုးတော့မယ်..မြတ်မင်းတောင်သတိမထားမိတော့ဘူး ခုမှအသိရကာ.. အေးအေးမင်းထက်လိုးလိုက်တော့ ဟင့်အင်း ဆရာမ မခံနိုင်တော့ဘူး နာလှပြီ ဆရာမနာတယ် စပက်လဲပြဲပါပြီကွာ..။
ဟင့်ဟင့် ဆရာမမျက်ရည်ဝဲညီးသံနဲ့အတူမြတ်မင်းလီးအကြီးကြီးကိုထက်သွင်းခံရပြန်တယ် အား..အား.. ဟျောင့်မြတ်မင်းငါပြန်တော့မယ်၆နာရီရှိနေပြီငါပြန်ပြီကွာ…မြတ်မင်းလဲလိုးနေတာကြောင့်ခေါင်းဘဲငြိမ့်ပြပြီးဆက်တိုက်လိုးနေပြီးကျန်ခဲ့တော့တယ် ဆရာမစပက်တော့ပြဲလောက်ပြီ နောက်နေ့မနက်ကျောင်းလာတော့မြတ်မင်းကိုမေးကြည့်တာဆရာမတော်တော်မျော့သွားပြီးမြတ်မင်းတို့အိမ်မှာခေါ်သိပ်လိုက်ရတယ်တဲ့..နောက်ပြီးကျောင်းလဲ၃၄ရက်လောက်မလာနိုင်တော့ဘူး ဆရာမကျောင်းပြန်လာချိန်လဲတစ်ယောက်တစ်လှည့်စီတစ်ပတ်တိုင်းဆရာမကိုခေါ်ပြီးလိုးကြတာပေါ့ဗျာ……….ပြီးပါပြီ။